သုံးရလွယ်ပြီး အသားအရေကို သိသိသာသာကောင်းလာစေမဲ့ The Saem ရဲ့ Mask လေးတွေအကြောင်း | CosmeticMyanmar
Home » Article » သုံးရလွယ်ပြီး အသားအရေကို သိသိသာသာကောင်းလာစေမဲ့ The Saem ရဲ့ Mask လေးတွေအကြောင်း
အခုတလော modeling mask pack လေးတွေ ခေတ်စားလာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ရိုးရိုး mask sheet တွေနဲ့ ဒီ modeling mask လေးတွေရဲ့ မတူတဲ့အချက်က ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ကွက်တိဖြစ်ပြီး စေးကပ်ကပ်မဖြစ်ဘဲ နူးညံ့တဲ့ texture ကြောင့်လူကြိုက်များကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် The Saem ရဲ့ Luesthe Modeling Pot လေးကလည်း The Saem ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး item တွေထဲက တစ်ခုပါ။
ဒီ Luesthe Modeling Pot လေးက အဓိကအားဖြင့်တော့ collagen ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်ကို ဖြည့်ပေးပြီး intensive care သဘောမျိုး ပေးနိုင်တာကြောင့် သုံးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းသိသာစေမှာပါ။
ဒီ mask လေးမှာတော့ Aloe Vera, Gold, Goji Berry နဲ့ Peppermint ဆိုပြီး လေးမျိုးရှိပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပေးတဲ့ main effect ကတော့မတူပါဘူးနော်။ ဘယ် mask pot လေးက ဘယ်လို effect တွေပေးတာလည်းဆိုတာကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့
1. Aloe Vera – အသားအရေနဲ့ ရေဓါတ်ကိုဖြည့်ပေးပြီး intensive care ကိုပေးတာကြောင့် နေပူထဲကြာကြာသွားထားရတဲ့သူတွေ၊ ကမ်းခြေကပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
2. Gold – အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး Glow skin လိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒီ 24K gold ပါတဲ့ Gold Modeling Pot ကိုရွေးသင့်ပါတယ်။
3. Goji Berry – Berry အသီးလေးတွေကရတဲ့ vitamin တွေအပြည့်ပါလို့ ဒီ mask လေးက အသားအရေကို အားတွေပြန်ဖြည့်ပေးပြီး လန်းဆန်းစေပါတယ်။
4. Peppermint – ချွေးပေါက်တွေကိုသန့်စင်ပေးပြီး moisture balance ကို ထိန်းညှိပေးတာကြောင့် အသားအရေကို အနားပေးဖို့ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
ဒီ modeling pot လေးက အသုံးပြုရတာလည်းအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အထုပ်လေးကို ဖောက်၊ ပြီးရင် ရေအေးအေးလေးကို အထုပ်ထဲဖောက်ထည့်ပြီး တစ်ပါတည်းပါလာတဲ့ တုတ်ချောင်းလေးနဲ့မွှေပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း အဲဒီတုတ်လေးနဲ့ပဲ မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးပြီး ၁၅မိနစ် မိနစ်၂၀လောက် ထားပေးလိုက်ပါ။ မျက်နှာမှာ တင်းလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့အလိုလို gelatin လေးလိုဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံးခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါ အလွယ်တကူခွာချလိုက်ရင်ရပါပြီ။ သုံးပြီးတာနဲ့ နူးညံ့စိုပြေသွားတဲ့မျက်နှာလေးကို မြင်ရမှာပါနော်။ review တော်တော်များများမှာလည်း ပြောထားကြလို့ ဒီ Luesthe Modeling Pot လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Image references : http://www.thesaemcosmetic.com
Tags: Luesthe Modeling PotModeling MaskSkin Carethe saem